Matoan-dahatsoratra 1_Fiarahabana Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
MATOAN-DAHATSORATRA – 19/07/2014
Raha misy zava-tsarotra atrehin’ny olona tsirairay eo amin’ny fiainana – fa iza moa no afaka amin’izany eto an-tany?-, dia tsy isalasalana fa maizina aminy ny tany aman-danitra.
Azo atao ihany ny hahita ny hakanton’izao tontolo noharin’Andriamanitra izao raha toa ka misy tara-pahazavana kely.
Fa raha misy olona afaka hahita ny hasoan’izao tontolo nohariana izao na dia ao anatin’ny aizina mikitroka aza, dia izany indrindra no fanambin’ny finoana an’i Jesosy Kristy;
Fa eo amin’ny fiaraha-monina andavanandro? dia azo lazaina ankapobeny fa samy afaka ny ho tia ny namany ihany ny olona tsirairay, samy afaka ho tia izay tia azy ny olona rehetra. Fa ny fitiavana ny fahavalo dia tsy isalasalana fa fanamby iainan’izay mino an’i Jesosy ihany.
Fa misy fanamby kristiana ihany koa izay lazain’i Jesosy Tompo ao amin’ny toriteny teny an-tendrombohitra manao hoe: « Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin’izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo izay any an-danitra » (Mat. 5 and.47-48).
Na dia zavatra toa tsotra loatra aza ny fiarahabana olona dia hita fa tsy mandeha hoazy izany akory. Amin’ny fanompoam-pivavahana alahady maraina araka ny ritoalintsika dia misy fiarahabana ara-litorjia maromaro ihany: ohatra alohan’ny famakian-teny sy alohan’ny tsodrano aronika, ny iray amin’ny Fiangonana (ny pastora) dia miarahaba ny be sy ny maro (mpiangona) manao hoe « Ho aminareo anie ny Tompo ». Alohan’ny fitorianteny dia miarahaba ny mpiangona manontolo ny mpitoriteny manao hoe « Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ». Amin’ny asa sy fampaherezana, ny mpiandry tsirairay mametra-tanana dia mamarana hoe « Ho aminao anie ny fiadanana ». Ny Pastora, rehefa avy manao teny fampaherezana ny mpandray ny fanasan’ny tompo indray manatona ny alitara masina dia manao hoe « Ho aminareo anie ny fiadanana »
Amin’izao vanimpotoana momba ny Trinite masina izao, araka ny taona ara-piangonana dia tsiahivina fa Jesosy tenany ilay nitsangana velona ka tsy maty intsony no fototra ara-panahy iorenan’ny fiarahabana ara-litorjia rehetra.
Izy Jesosy dia tsy vitan’ny hoe miarahaba ireo mpianany izay tafangona tao an-trano, fa mihoatra lavitra noho izany: MANOLOTRA FIADANANA, MANOME FIADANANA HO AZY IREO; na toy inona na toy inona moa anefa, ny fiarahabana ara-litorjia rehetra dia mikendry ny fitomboan’ny Fiangonana ara-pifankatiavana sady natao hampavitrika ihany koa ny « mission de présence »-’ny fiangonana eo anivon’ny fiaraha-monina misy azy. Ataontsika fa fanamby maha-Fiangonana ny Fiangonana koa izany. Mazotoa e!
Mpitondra Fitandremana Orléans